muchina uyu uzere zvaitika mhando ine rimwe encrusting muchina, mumwe tsikwa muchina mumwe tireyi-tsitsi muchina. Nokuwedzera kana kuchinja optioneel zvokushandisa uye namano, ichi dzaFord aigona kushandiswa pave nemimwe zvokudya / tudyo / pastries.
4000 ~ 6000 bv / hr
2000 ~ 4500 chidimbu / hr
3000 ~ 7000 bv / hr
10 ~ 150g / yori
15 ~ 180g / chidimbu
60 ~ 120 g / yori
178 * 50 * 100 masendimita
About 310 makirogiramu
1) Save basa mutengo pakupedzisira. Anokwanisa kuita zvokudya zvakasiyana
2) Kunzwisisa mutengo uye yakakwirira chinzvimbo.
3) Easy kuti oparesheni, kuchenesa, vaungana, uye kugadzirisa.
4) zvinhu Different angashandiswa nokuda encrusting zvigadzirwa.
Previous: otomatiki wokuBrazil huku coxinha nokuparira Machine
Next: otomatiki aizikirimu mochi nokuparira Machine
Maamoul Achigadzira Machine
Maamoul Kuita Machine
Maamoul mudungwe Line
otomatiki chihenge keke nokuparira Machine
Automatic scotch zai hwakasimba zvekupfakira encrusting M ...